Ogaden News Agency (ONA) – Mashquuli inta aanay kugu mashquulin
Mashquuli inta aanay kugu mashquulin
Siduu ku sheegay Dr. Selam Beyene maqaalkiisii aan ka soo tarjunay ( ka akhri halkan ), waxay TPLF-ta qasab kaga dhigtay dhamaan shacabka Itobiya iyagoon kala hadhin inay u baroortaan Meles Zinawi oy isugu soo baxaan goobaha loo calaamadiyay tacsidiisa. Gaar ahaan shucuubta sida goonida ah loo amray inay u fuliyaan baroor-diiqa ayuu ka mid yahay Ogadenya oo la doonayo in lagaga mashquuliyo danahooda iyo inay ka fikiraan marxaladdan ay Itobiya gali doonto.
Wararka ka imanaya Ogadenya waxay sheegayaan inay dadweynahii magaalooyinka iyo tuulooyinka daganaa kolba meelo lagu soo ururiyo oo la amro inay u ooyaan Meles Zinawi. Arintaa akhlaaqda aadmino ka soo horjeeda ee shacabka aan waxba galabsan ee ogsoon inuu Meles Zanawi dhib mooyaane uusan wax dheef ah uusan u keenin, waxay muujinaysaa siday isugu dhex yaacsan yihiin xisbiga TPLF ee talada dalka gacanta ku haya iyo adeegayaashiisa u jooga Ogadenya.
Dhamaan magaalooyinka waaweyn waxaa laga furay meelo la dhigay buugaag laga doonayo qofkasta inuu yimaado oo gabay, ama geeraar ama buraambur kolba wuxuu yaqaano uu ku qoro iyo duco loogu ducaynayo Meles waxay jecelyihiin oo Ilaahay agtiisa uu ka fogeeyo inuu helo gaal Meles oo kale ah. Goobahaa la dhigay buuga tacsida ayaa waxaa fadhiya habeen iyo maalin guddi loo xilsaaray oo tirakoobaya dadka xaafadda dagan ee qoray iyo hadday jiraan qaar aan soo xaadirin. Ujeedada ugu weyn ee ka dambaysa arintanna waa in dadka la ragagixiyo oo la mashquuliyo si aanay uga wada hadlin wax aan ahayn sideed u ooyday iyo ilin makaa timid aniga waan iska waayaye.
Waxaan ka helnay elo-wareedyo jooga magaalada Qabridahare in shalay subaxnimadii hore dadka magaalada dagan la amray inay isugu yimaadaan meel banaan ah oy u ooyaan Meles iyadoo dadka ay dhex socnayeen askarta Wayaanaha oo indhahooda fiirinaya inay ilin ka hooreyso iyo in kale. Ciqaab wadareedkaa shacabka ayaa socotay ilaa iyo waqti dambe maalinimadii oy dadka dhoobnaayeen qoraxda kulul.
Arimaha kalee la yaabka leh waa reer miyigii oo la amray inay xoolo soo ururiyaan loogu magacdaray in tacsida la gaynayo, hasa ahaatee ay kooxda TPLF-ta ee dalka joogta iyo adeegayaashooda ay u tashan doonaan.